Cyanogen သည် C-Apps Package ကို CyanogenMod ROM များသို့ဖြန့်ချိသည် Androidsis ပါ
Cyanogen သည်သင့်အားပေးနိုင်ရန် Cyanogen OS တွင်ထည့်သွင်းထားသော app များစွာကိုစမတ်ဖုန်းများစွာ၌မိတ်ဆက်ခဲ့သည် အဲဒီဖုန်းတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်အရာတစ်ခုရှိတယ် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးကိုပေးနိုင်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလွှာကိုဖန်တီးပါ။ OnePlus One, WileyFox, ZUK Z1, Andromax Q နှင့် YU ကဲ့သို့သောဖုန်းများသည်ကြီးစွာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်ဤဖုန်းများကို ၀ င်ရောက်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များပေးနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ အလွန်တရာထူးခြားသော Cyanogen ROM နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများတွင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့ software စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းကဲ့သို့သူတို့ကိုယ်သူတို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါ။
CyanogenMod ROM ကိုမိမိတို့ဖုန်းတွင် install လုပ်နေသောအသုံးပြုသူများအတွက်ဤအက်ပ်များကိုမရနိုင်ပါ။ ယနေ့မှစ၍ ဤအရာသည်မည်သည့်အရာများနှင့်ပြောင်းလဲသွားသနည်း ဤအထုပ်၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှု Cyanogen ဟုခေါ်သော Cyanogen အက်ပ်များ ဒီ app pack သည်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီး CM 12.1 ကဲ့သို့သင် install လုပ်မည့် ROM တွင် pre-installed အဖြစ်မပေါ်ပါ။ OnePlus One (သို့) အခြားဖုန်းများကဲ့သို့ ၀ ယ်သူတစ် ဦး မှသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုချဉ်းကပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် BQ ဖြစ်လိမ့်မည်.
1 C-Apps များ
2 အသံ FX
4 theme Store က
6 Truecaller နှင့် Cyanogen Dialer
7 Boxer သည်အီးမေးလ်အဖြစ်
8 Cyanogen အကောင့်
ဤအက်ပလီကေးရှင်းများကို Cyanogen ROM တစ်ခု install လုပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ချိန်ချိန်ကတည်းကကောင်းကောင်းမှတ်မိသည် အချို့သည်ဤအစောပိုင်းဗားရှင်းများမှလာကြသည် ဤကိုယ်ပိုင်အလွှာအောက်ရှိဖုန်းတစ်လုံးအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာရန်။ အမှန်မှာ developer များအဖွဲ့သည် Froyo သို့မဟုတ် Ice Cream Sandwich ကဲ့သို့ Android ဗားရှင်းများကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့ software ပြဿနာများရှိခဲ့သောအခါဤ developer အဖွဲ့သည်၎င်း၏အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။
ဤအက်ပ်များဆက်တိုက်နိုင်သည် အဆုံး၌ unloaded ဤအဝင်
လူကြိုက်အများဆုံးဖုန်းများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထုံးစံအလွှာအများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလေ့ရှိသော app တစ်ခုဖြစ်သည် ဒီအသံကိုညှိပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည် ရော့ခ်သို့မဟုတ်ဂန္ထဝင်တေးဂီတကဲ့သို့ပုံသေပုံစံများပါ ၀ င်သောစိတ်ကြိုက် profile များကိုထိန်းချုပ်ပါ။
ဒီ app တစ်ခုရှိတယ် intuitive နှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း ၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်သုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နားကြပ်မှနားထောင်သောအကြိုက်ဆုံးဂီတအတွက်အထူးထိတွေ့မှုကိုပေးနိုင်သည်။
ကမ်းလှမ်းမှု အရည်အသွေးမြင့် 24-bit အသံ ဘေ့စ်၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၊ reverb နှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံ ၁၃ ခုအထိအကျိုးအမြတ်များနှင့်အတူ
ဖုန်းကိုသင်လိုချင်သည့်ပုံစံအတိုင်းပြုလုပ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော app တစ်ခု ဒီ app ကိုကမ်းလှမ်းရန်ရရှိနိုင်ပါသည် နောက်ထပ်စိတ်ကြိုက် ကိုယ်ပိုင်နှင့်အထူး desktop တစ်ခုဖန်တီးရာတွင်
Theme Chooser ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုရောမွှေပြီးအတုယူပါ မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် CyanogenMod အောက်ရှိဖုန်းရှိအခြားသုံးစွဲသူများနှင့်မတူတမူထူးခြားသောတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
theme Store က
ငါတို့မှာဖုန်းရဲ့ theme ကိုပြောင်းဖို့ရွေးစရာရှိရင်ငါတို့မှာမရှိတာကအဲဒီ့လိုမျိုးအမျိုးစုံလင်ကနေအသစ်တွေကိုရယူဖို့ဆိုတဲ့အပလီကေးရှင်းဘဲ။ အကြောင်းအရာ ၂၀၀ ကျော်အချို့ကိုပုံမှန်ထပ်ထည့်သည်။
စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရန်ယခင်အဟောင်းနှင့်လုံးဝပေါင်းစပ်ထားသော app တစ်ခု အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Cyanogen ROM တစ်ခု
La ပေါင်းစည်းပုံရိပ်ပြခန်း Cyanogen သည်ကင်မရာနှင့်ရိုက်ထားသောပုံများအားလုံးကိုသို့မဟုတ်အခြားကွဲပြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများမှယူဆောင်လာသည်။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်များထဲမှတစ်ခုက၎င်းတို့ကိုထပ်တူပင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အမိန့်ပေးထားသည်။
အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ဓာတ်ပုံများကိုရယူပါ ဒါကဒီဇိုင်းရဲ့နောက်မှာသိပ်မကွာပါဘူး၊ Cyanogen ကကောင်တွေဟာအရာတွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပုံကိုကောင်းကောင်းသိကြောင်းပြပါတယ်။
Truecaller နှင့် Cyanogen Dialer
con အဆက်အသွယ် ၁.၇ ဘီလီယံကျော် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ခိုင်ခံ့သော dialer သည် Truecaller ခေါ်ဆိုမှုများထဲသို့ပေါင်းစည်း။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပုံစံသို့ရောက်ရှိနိုင်သော spam များကိုဖော်ထုတ်ပြီးပိတ်ဆို့စေသည်။
ဒီလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း သင် Cyanogen အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်သည် ၎င်းကိုအသက်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းကြားစာ panel မှခေါ်ဆိုမှုကိုတားမြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည် spam ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည်။
အီးမေးလ်ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် နောက်ဆုံးအသုတ်မှ ၎င်းသည်နေ့စဉ်အီးမေးလ်ဒါဇင်များစွာဖြတ်သွားသောစာပုံးကိုစုစည်းထားသောနည်းလမ်းကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားသည်။
ဒါဟာဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးထားပါတယ် အကောင့်များစွာကိုစင့်ခ်လုပ်ထားသည် app တစ်ခုတည်းမှ
Cyanogen အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည် Theme Store သို့ဝင်ရောက်သည် သင့်ရဲ့ device ကိုတည်နေရာစွမ်းရည်ဖုန်းကို spam များကာကွယ်ရန် TrueCaller လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ပါ။ Cyanogen အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးနောက်၎င်းကိုစီမံနိုင်သည် အကောင့်.cyngn.com.
အတွက် C-Apps ကို download လုပ်ပါ မင်းအနားယူနိုင်တယ် Cyanogen စာမျက်နှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Cyanogen သည် CyanogenMod အသုံးပြုသူများအတွက် C-Apps Suite ကိုကြေငြာခဲ့သည်
CM ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသော Mobile အတွက်အလုပ်လုပ်သလား။ ငါသာအဲဒီ app တွေရှိချင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား။
ကောင်းပြီ၊ ငါ့မေးခွန်းကိုငါဖြေတယ်၊ ​​"မင်းကဒီအထုပ်ကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံမှုအတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်စွဲနဲ့ CM 12.1 တည်ဆောက်မှုမှာရှိရမယ်။ "
ငါ့ရဲ့မသိနားမလည်မှုအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါတွေကဒီ operating system အတွက်တစ်ခုတည်းသော app တွေပါ၊ ဒါကြောင့်ငါ install လုပ်လိုက်ရင် app ရဲ့ intagram နဲ့အရာတွေကိုငါမေ့သွားတယ်။ ဒီ app အမျိုးအစားတွေကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ဘယ်ခလုတ်ကိုမှမတွေ့ဘူး